Isiraely: Korian’ny fianianana ho mahatokin’ny Firenena ny demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2010 21:19 GMT
Nolanian'ny filankevitry ny governemanta Isiraeliana tamin'ny 22-8 ny volavolam-panitsiana ny lalàna fizakana ny zo Isiraeliana, izay mitaky amin'ireo rehetra mangataka zom-pirenena ny fanekena an'Isiraely ho “fanjakana Jiosy sy demaokratika.” Mba hitoeran'izany ho lalàna moa dia tsy maintsy mandalo fifidianan'ny Knesset telo izany mandritra ireo volana ho avy ireo.
Nampisarantsaina aoka izany ny fikasana maro hanerena ny fanekena an'i Isiraely ho [firenena] Jiosy irery ihany, indrindra ho an'ireo Arabo mizaka zom-pirenena Isiraeliana, izay mandrafitra ny iray ampahadimin'ny mponina. Ny sasany miteny fa manaraka an-kitsirano ho mpanatanteraka ny politikan'ny antoko nasionalistan'i Avigdor Lieberman i Bibi Netanyahu. Ny hafa indray mahita fa lojika ny “tsy maintsy itakiantsika avy amintsika hoe Isiraely tahaka ny ahoana no takiantsika amin'ny hafa ho ekena”, raha itodihana ny takian'i Isiraely avy amin'ny Palestiniana hanaiky azy ho Firenena Jiosy. Manameloka ity faneken'ny filankevitry ny governemanta ity ny filohan'ny Kadima Rtoa Tzipi Livni, mametraka azy ho “politika amin'ny endriny ratsy indrindra” sy “adivarotra politika”.
Ao amin'ny bolongana i Orit Kamir no mampahatsiahy antsika ireo lalàna izay tsy nekena taloha raha miresaka momba ity lohahevitra ity ihany:
Nahangona Isiraeliana hanohitra ny volavolan-dalàna ity Vondrona Facebook ity. Toy izao manaraka izao ny resadresaka teo amin'ny mpikambana tao amin'ny vondrona Isiraeliana sy ny Isiraeliana mpanohitra:
Dean Michaely :
Barak Granot :
Daniel Oz :
Ziv Gur-arye :
Dean mamaly ihany koa:
Irwunsch namindra ny nosoratan'i sethacohen33:
Bradley Burston manangona ny lisitry ny azo atao mba hampiatoana ilay lalàna: